စတိုင်နံပါတ်:LY20-025အရောင်: အဖြူရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: 95% ဝါဂွမ်း 5% spandex တစ်ခုတည်းဂျာစီ၊
စတိုင်နံပါတ်:LY20-024အရောင်: အဖြူရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၉၅% ဝါဂွမ်း ၅% spandex တစ်ခုတည်းဂျာစီ၊ ၁၆၀ gsm အသုံးအဆောင်: Sequin မှတ်ချက် - ရှေ့ဆက်အောက်ချည်ထားသောချည်ကြိုး၊
စတိုင်နံပါတ်:LY20-020အရောင်: အဖြူရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၉၅% ဝါဂွမ်း ၅% spandex တစ်ခုတည်းဂျာစီ၊ ၁၆၀ gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ယက်တိပ်မှတ်ချက်မှတ်ချက် - သံမဏိကြမ်းတမ်းသောကျောက်မျက်ရတနာဖြင့်နေရာချထားပုံနှိပ်ခြင်း၊
စတိုင်နံပါတ်:LY20-018အရောင်: အဖြူရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၉၅% ဝါဂွမ်း ၅% spandex တစ်ခုတည်းဂျာစီ၊ ၁၆၀ gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Sequin, Rhinestone မှတ်ချက်။
မိန်းကလေး၏တီရှပ် L / s L-340
စတိုင်နံပါတ်:L-340အရောင် - အဖြူရောင်အရွယ်အစားအကွာအဝေး - 4-12A အထည်: ၉၅% ဝါဂွမ်း ၅% spandex တစ်ခုတည်းဂျာစီ၊ 200 gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း - Rhinestone မှတ်ချက် - သံမဏိကြမ်းတမ်းသောကျောက်တုံးများဖြင့်နေရာချခြင်း၊ ထည်နှင့်ပန်းထိုးခြင်း၊
စတိုင်နံပါတ်:L-058အရောင်: အဖြူရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၉၅% ဝါဂွမ်း ၅% spandex တစ်ခုတည်းဂျာစီ၊ ၁၆၀ gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ယက်တိပ်လေးသည်အသွင်အပြင်： အင်္ကျီလက်များပေါ်တွင်ရှီဖီဆန်၊ နှလုံးသားဖြင့် 3D ပန်းထိုးခြင်းမှတ်ချက်။ rhinestone & လက်အပ်ဖြင့်လေး
မိန်းကလေး၏တီရှပ် L / s GR-Z12
စတိုင်နံပါတ်: GR-Z12 အရောင်: ရေတပ်အရွယ်အစား: 1-5A အထည်: 60% rayon 35% နိုင်လွန် 5% spandex ponte-de-roma, 320gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ပလတ်စတစ်ခလုတ်၊ Rhinestone မှတ်ချက်။ ။ သံကြိုးဖြင့်တောက်ပသောပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပန်းထိုးခြင်း၊ ကွက်လေး၊ သတ္တုနှလုံး၊ ဝါဂွမ်းယက်ထည်နှင့်လည်ပင်း
စတိုင်နံပါတ်: CWP-190906 အရောင်: အဖြူအရွယ်အစား: 4-12A အထည်: 95% ဝါဂွမ်း 5% spandex တစ်ခုတည်းဂျာစီ, 160gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Sequin မှတ်ချက်များ: နေရာချထားပုံနှိပ်, Sequin ပန်း။
စတိုင်နံပါတ် .: CWP-190905 အရောင်: အဖြူရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၉၅% ဝါဂွမ်း ၅% spandex တစ်ခုတည်းဂျာစီ၊ ၁၆၀ gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ယက်သည့်တိပ်လေးမှတ်ချက်များမှတ်ချက် - ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ sequin ပန်းထိုး၊ လက်ဖြင့်အပ်ချုပ်ခြင်း။ နောက်ကျောအပေါ်ကွေးအနား
မိန်းကလေးရဲ့ hoodie LY20-041
စတိုင်အမှတ်။ : LY20-041
အထည်: ၁၀၀% ဝါဂွမ်း၊ ၂၈၀ ဂရမ် + ၁၀၀% ချည်မျှင် - စင်းချည်ထည်အောက်ခြေတွင်
ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Elastic တိပ်၊ ပုလဲ၊ သားမွေးဘောလုံး၊ ပလပ်စတစ်ခလုတ်
မှတ်ချက်။ ။ သံမဏိတိုင်၊ ပုလဲနှင့်သားမွေးဘောလုံးတို့ဖြင့်ပုံနှိပ်ထားခြင်း၊ ၂ စက္ကူအတုအစည်များအောက်ခြေရှိအစည်များ
စတိုင်နံပါတ် .: L-320 အရောင်: ရေတပ်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၁၀၀% ဝါဂွမ်း၊ ၂၈၀ ဂရမ်အပိုပစ္စည်း - မျက်လုံး၊ ကြိုးကြိုးချည်မှတ်ချက်များမှတ်ချက် - သံပြားမျက်လုံး + ရှေ့ဖက်ကြိုးချည်များ
Style No .: GXX-6 အရောင်: ပန်းရောင်အရွယ်အစား: 2-8A အထည်: ၁၀၀% ဝါဂွမ်း၊ ၂၈၀ ဂရမ် + ရှေ့ဖက်ကိုယ်ထည် - ၁၀၀% polyester ယုန်သားမွေး; ရှေ့ဖက်ကိုယ်ထည် - Poly တစ်ခုတည်းဂျာစီ၊ ၁၅၀ ဂရမ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း - Elastic တိပ်၊ Sequin အသွင်အပြင် - ကိုယ်ပိုင်ထည်ဝါးထိုးထားသောအစွန်း၊ လက်ရိုးများပေါ်တွင်အစွန်းပါ ၀ င်မှု၊ ရှေ့ရှိယုန်သားမွေးထည် panel တွင်မှတ်ချက်မှတ်ချက်များ - Patch ပန်းထိုးခြင်း၊ Sequin ပန်းထိုး